Fiovana lehibe amin'ny iPad Mini kely an'ny 2021 | Vaovao IPhone
Fiovana lehibe amin'ny iPad Mini kely hatramin'ny 2021
Betsaka no nijanona misy tantely eo amin'ny molotra miaraka amin'ny fahatongavan'ny iPad Pro vaovao sy ny antony nanirian'i Apple hamela fotoana kely kokoa hanavao ny kinova mahazatra an'ny iPad sy ny iPad Mini, na izany aza, mitondra vaovao tsara izahay.
Ny iPad Mini vaovao izay ho tonga amin'ny 2021 dia hanana USB-C sy Smart Connector amin'ireo zava-baovao hafa izay hahatonga azy io ho fitaovana tsy mampino. Toy izao no itiavan'i Apple ny filokana amin'ny Mini ho iray amin'ireo safidy hafa habe mahasarika indrindra raha resaka takelaka, ho hitantsika eo ihany ve?
Araka ny voamarina ao 9to5Mac, afaka nahafantatra fa ny iPad Mini vaovao dia manana ny kaody J310 ary amin'ny ankapobeny dia hitondra vaovao mahaliana izany, ny voalohany dia ny iPad Mini no hametaka ny Apple A15, iray amin'ireo processeur farany avy amin'ny orinasa Cupertino. Saingy tsy misy ilana azy io hery tsy misy fifehezana rehetra io, ary izany no antony nanapahany hevitra hiaraka aminy USB-C sy ny Smart Connector ho an'ny kojakoja toy ny kitendry. Amin'izany fomba izany, ny iPad nentim-paharazana dia ho farany amin'ny iPad miaraka amin'ny mpampitohy Lightning, ka ny ho avy dia soratana amin'ny lakilasy USB-C farafaharatsiny apetrak'i Apple.
Ity mpikirakira A15 ity dia hanana rafitra fananganana nanone dimy mitovy amin'ny A14 ary ny variana aminy, A15X, dia efa eo an-databatra ihany koa. Ity USB-C ity dia hahafahantsika miditra haingana sy mora amin'ireo kojakoja sy rafi-pitadidy izay hanome iPad iPad fahaiza-manao betsaka noho izay azontsika eritreretina. Amin'ity lafiny ity dia manapotika ny drafitra rehetra naoriny i Apple. Amin'izao fotoana izao, ny iPad fidirana ambaratonga, antsoina hoe J181, dia hifikitra amin'ny processeur A13 an'ny Apple ary ny vidiny antonony kokoa ho an'ny 10,2 santimetatra, raha Ity iPad Mini amin'ny 2021 ity dia antenaina fa eo anelanelan'ny 8,5 sy 9 santimetatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Fiovana lehibe amin'ny iPad Mini kely hatramin'ny 2021
Ahoana no hahafantaranao raha voan'ny Pegasus ny iPhone
Torohevitra fanadiovana paoma ho an'ny fitaovantsika: "Aza manadifotsy na hidrogenika peroxyde mihitsy"